bakhala "ngesihluku" esibhedlela saseNkandla - Ilanga News
Home Izindaba bakhala “ngesihluku” esibhedlela saseNkandla
bakhala “ngesihluku” esibhedlela saseNkandla
ISIBHEDLELA saseNkandla esisolwa ngokungabanakekeli abasolwa ngeCorona.
KUKHALWA ngabahlengikazi okuthiwa kabafuni ukusebenza esibhedlela saseNkandla ngoba besaba ukutheleleka ngegciwane leCovid-19.
Ezinye zeziguli ezilaliswe kulesi sibhedlela, zithi sekuphele izinsuku ezine zingalutholi usizo ngenxa yokuthi abahlengikazi kabafuni ukusondela kuzona, bathi kabaphephile.
Esinye isiguli esiligodlile igama laso, sithi sifike esibhedlela siphethwe wumkhuhlane savalelwa egunjini laso sodwa, kasaze sanikwa ngisho amaphilisi.
“Sivalelwe egunjini elingcolile, kasinikwa lutho, akekho nosinakayo, abahlengikazi bathi ngeke bangene kuleli gumbi esikulona ngoba besaba iCorona. Kabukho nobufakazi bokuthi siphethwe yiCorona ngoba igazi lithathwe ngosuku lokuqala engilaliswe ngalo esibhedlela layohlolwa, kangikaze ngitshelwe nemiphumela,” kusho lesi siguli.
Lezi ziguli zithi okuzihlukumezayo wukuthi uhulumeni akazange uthi mabanganakwa abaphethwe yiCorona noma babandlululwe njengoba kwenzeka esibhedlela eNkandla. Lesi siguli sithi ngisho ukudla bakulethelwa yizihlobo. Sithi uma kungafikanga isisebenzi sasesibhedlela esipheka ebusuku, okuyisona esiba-nika namaphilisi, bagcina benganakiwe.
“Okuxakayo wukuthi izisebenzi zasesibhedlela zinazo izinto zokuzivikela kodwa kazifuni ukusondela lapho esikhona. Siyafisa uhulumeni uyibhekisise indaba yaseNkandla, kungcono sikhishwe siyofela emakhaya ngoba kalukho usizo esiluthola kulesi sibhedlela.
“Kuyadingeka uhulumeni usonde-le eNkandla. Abantu bayashona ngoba abahlengikazi kabanendaba neziguli. Kuyaxaka ukuthi abantu basuke bewukhetheleni lo msebenzi uma bengenalo uthando lwawo,” kusho umthombo.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal uNkz Noluthando Nkosi, uthi udaba lwaseNkandla luzolandelelwa.
Previous articlelizohlehlela usuku olungakaziwa icala lobeyimeya yetheku
Next articleUphumela obala ngekusasa uShabba